Miaramila ho an'i Kristy
"Ary noho izany, dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra, mba hahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory; ary rehefa vitanareo avokoa, dia hahafahatra hianareo. Mifahara ary, ka sikino fahamarinana ny valahanareo, ary mitafia ny rariny ho fiarovan-tratra, ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsaran'ny fihavanana ny tongotrareo; ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tano ny finoana ho ampinga, izay hahazoanareo hamono ny zana-tsipika mirehitra rehetra izay alefan'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny Fanahy." — Efes. 6:13-17.
Tsy maintsy misedra zava-tsarotra sy fitsapana ny miaramila rehefa any an'ady. Tsizarizary ny sakafo omena azy ireo, ary voafetra ny habetsahan'izany matetika. Manao dia lavitra isan'andro izy ireo, mandeha amin'ny lalana mikitoantoana, danihin'ny masoandro, mitoby an-kalamanjana amin'ny alina, matory amin'ny tany, tsy manana hotafiana afa-tsy lanitra, misedra ny oram-batravatra sy ny hatsiaka mamanala, noana, torovana sy reraka, mijoro ho lasibatry ny fahavalo, ary tafiditra any anaty ady mahafaty. Amin'ny alalan'izany no ianaran'izy ireo ny hevitry ny hoe fihafiana. Ireo izay ao anaty lisitry ny miaramilan'i Kristy koa dia antenaina mba hanao asa mafy sy hiaritra fitsapana noho ny Aminy. Fa ireo izay miara-miaritra fijaliana Aminy dia hiara-manjaka Aminy ihany koa.
Iza amintsika no nifidy hanao ny asa fanompoana ka manantena fiadanam-piainana, manantena ny hiala kely amin'ny asa rehefa te hanao izany, mametraka ny fitaovam-piadian'ny miaramila ka manao ny akanjon'olon-tsotra, matory ao amin'ny toeram-piasana, ka mahatonga faniniana amin'ny asan'Andriamanitra noho izany? Tsy mba handa ny tenany ka hiaritra fahoriana ny olona tia fiadanam-piainana; ary rehefa mila olona hiady ho Azy Andriamanitra, dia tsy mba vonona izy ireo hamaly hoe: "Inty aho, iraho aho". Mafy sy sarotra ny asa tsy maintsy atao, fa hotahina kosa ireo izay vonona hanao izany rehefa voantso ny anarany. Tsy hahazoana valisoa any amin'ilay tany vaovao ny fikatsahana fatratra ny fiadanana eto an-tany. Eto an-tany fiadiana isika izao, tsy misy fotoana itsaharana, tsy misy fotoana iadanana, tsy misy fotoana iheverana izay mahafinaritra ny tena. Rehefa avy nahazo tombontsoa iray dia tsy maintsy tohizana indray ny ady; tsy maintsy manohy ny tolona ianao mba handresy, ary manangona hery vaovao ho amin'ny ady vaovao. Ny fandresena tsirairay azo no hanome herim-po sy finoana ary fahavononana. Handresy tanteraka ny fahavalo ianao amin'ny alalan'ny hery avy any ambony." — ST, 07 Septambra 1891.